CORONAVIRUS AMBATONDRAZAKA : 36 notiliana, iray no voa izay niteraka fahatairana ho an’ny mponina – Madatopinfo
CORONAVIRUS AMBATONDRAZAKA : 36 notiliana, iray no voa izay niteraka fahatairana ho an’ny mponina
Olona iray nahitana soritraretina no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus aty Ambatondrazaka, ny talata 26 Mey teo. Efa mandray ny fitsaboana sahaza azy any Toamasina izy io amin’izao fotoana izao. Andrasana kosa ny vokam-pitiliana natao tamin’ireo olona miisa 36. Arakarak’izay no hanarahana ny toromarika rehetra avy amin’ny fitondram-panjakana malagasy momba ny fandraisana an-tanana ny marary. Ao amin’ny hopitaly Ambatondrazaka no hanaovana ny fitsaboana raha sanatria misy indray ny mitondra ny tsimokaretina. Ny ao anatin’ny « centre operationnel »najoro isam-paritra no mifanome tanana amin’ny fikarakarana ny marary raha mbola tsy misy soritraretina sy tsy ahiana loatra ny fahasalaman’ilay olona. Misy ny fitaovana natolotry ny Fanjakana ho an’ny distrikan’ Ambatondrazaka hoenti-miatrika izany. Marihina hatrany fa fahatairana ho an’ny mponin’Alaotra ny naharenesana voalohany ity aretimandoza ity taty amin’ny faritra. Ankoatra ny fiarovana ny aina dia hisy vokany amin’ny fiainana andavanandro mantsy izany.
Namoaka naoty ny prefektioran’ Ambatondrazaka fa tsy maintsy mikatona ny tsena manomboka amin’ ny iray antoandro.Tsy misy mahazo misokatra intsony manomboka amin’io ora voalaza io raha tsy ny ampitso indray.Tsy maintsy manao aro-tava kosa ny olona izay tsy maintsy hivoaka ny trano. Manaramaso manodidina ny tanana ny mpitandro ny filaminana ary manasazy avy hatrany raha misy ny tratra tsy manara-dalana.